Saika isan-kerinandro tato ho ato dia fety be miezinezina foana no natrehana manerana ny nosy. Fety izay tsy nisy fikarakarana na fanomanana mazava kanefa dia mahagaga fa tonga lafatra foana ary mahatonga ny mpiray tanindrazana hiray hina sy hifampizara fifaliana. Na ireo nampandraiketin’ny fitondram-panjakana ny raharaha hahafahana mampihavana ny Malagasy aza miaiky fa hay mahay miombom-po ihany ireto ondriny nozarazarain’ny mpanao politika ireto. Ny hirariana moa dia ny mba hitondran’izao fotoan-dehibe ho an’ny voninahi-pirenena izao tokoa fisokafan-tsaina eo amin’ny samy mpiray tanindrazana ka mba hitombo ny Malagasy tsy hanaiky ho zarazarain’ny firehana politika intsony fa mba hahay hiady hevitra ao anatin’ny fo tony sy hitera-bahaolana. Mba tsy ho afaka volana vitsivitsy aorian’io fisandratantsika Malagasy any Ejipta io dia hiverina indray ny fifanenjehana politika sy ny politikan’ny fanararaotam-pahefana izay tsy nitsahatra nampimenomenona ireo mpisehatra politika sy mpanara-baovao Malagasy an-taonany maro.